Ikhaya Lezamabhayisikili Seliyilungele Indebe Yomhlaba Yabakhubazekile — Cycling South Africa
Ikhaya Lezamabhayisikili Seliyilungele Indebe Yomhlaba Yabakhubazekile
Akusensuku zatshwala ngaphambi kokuba kuqale ezemidlalo zendebe yomhlaba yamabhayisikili abakhubazekileyo eesigabeni wesine se-UCI Para-cycling Road World Cup ekomkhulu laKwaZulu-Natal eMgungundlovu kusukela ngomhlaka 11-13 Septhemba.
Idolobha laseMgungundlovu selizakhele igama njengekhaya lemicimci yomhlaba emikhulu, ikakhulukazi kwezemidlalo. Indebe yomhlaba kwezamabhayisikili i-UCI MTB World Cups isike yabanjelwa kulelidolobha ngonyaka ka2009, 2011, 2012 kanye nango2014. Eminye imincintiswano kwezamabhayisikili esike yabanjelwa eMgungundlovu i-UCI BMX Supercross World Cup ngo-2009 nango-2011, i-Msunduzi Road Challenge ngo-2011 nango-2013, i-UCI BMX World Championships ngo-2010, i-UWCT Final kwiMasters Road World Championships ngo-2012, i-UCI MTB Masters World Championships ngo-2013, i-UCI MTB & Trials World Championships ngo-2013 kanye ne-UCI MTB Marathon World Championships ngonyaka odlule.
Inhlokodolobha yaKwaZulu-Natal isizibonakalisile ukuba inawo umthamo wokuphatha lemicimci eheha abadlali nezihambeli zaphesheya kwezilwandle njengoba izophinde iphathe imincintiswano yezindebe ezahlukahlukeneyo njenge-UCI Para-cycling Road World Cup ngonyaka ozayo kanye ne-UCI Para-cycling Road World Championship ngo-2017. Lokhu kucacisa ngokusobala ukuba idolobha laseMgungundlovu liyikomkhulu lezemidlalo zamabhayisikili.
Izolo lokhu, lona lelidolobha belikade lemukela indathane yabagibeli bamabhayisikili kanye nabahambeli bezemidlalo ukuba bezothamela iMandela Day Marathon obuhlukene ngezigaba ezintathu ku42km, 21km, 10km kanti ingxenye yalomjaho ukusukela khona eMgungundlovu kanti waphelela eMandela Capture Site eHowick.
Yonke lemidlalo yayingeke ibekhona futhi ibe impumelelo ngaphandle koxhaso oluphuma kuHulumeni wesiFundazwe saKwaZulu-Natal kanye noMasipala waseMsunduzi behlangene nabagqugquzeli abezamabhayisikili kuzwelonke i-Cycling South Afrika. Umgangatho wemicimbi nemincintiswano ebanjwayo ikhombisa ukuzimisela kwalelidolobha kanti futhi ibonisa ukuzinikela koHulumeni basekhaya ekuthuthukiseni lomdlalo wamabhayisikili.
UMeya kaMasipala waseMsunduzi uKhansela uChris Ndlela uchaze kanje mayelana nokubaluleka komdlalo wezamabhayisikili kulelidolobha: “Siyaphinda siyasho ukuba uMgungundlovu owaziwa njengeCity of Choice uzimisele futhi usukukulindele ukwamukela izihambeli ngezinga eliphezulu njengoba kuyofika nabaphesheya kwezilwandle. Konke lokhu kuhambisana nomgwaqo-mgomo wethu othi: Sifuna ukuba idolobha eliphephile, elihlabahlosile ekuhlalekayo kulo, kusebenzeke, kufundeke, kukhuliseke undeni, kusebenzeke, kudlaleke futhi kushishineke kulo.”
“Idolobha lethu silidayisa njengedolobha elingu nqa phambili ekuhlanganiseni imicimbi nemidlalo yakuleli neyaphesheya kanti amabhizinisi ezokungcebeleka nezokushywa umoya iwona ahlomulayo, ikakhulukazi kwizihambeli zalemicimbi ezisuke zize edolobheni lethu,” kusho uSodolobha uNdlela.
Idolobha laseMgungundlovu aligcini ngokuhlomula ngezivakashi nje kuphela uma imidlalo isadlala kodwa lokhu kuyaqhubeka uma lezi zivakashi sezilokhu zibuya futhi zitshela nabanya ngalelidolobha nabo abagcina belokhu bebuyile iminyaka elandelanayo bezongcebeleka futhi bezosebenza nabanye bashishine.
Ukuseka ezemidlalo zamabhayisikili yidolobha laseMgungundlovu kuyinto enkulu ngoba lelidolobha lisanda kusayina isivumelwano seminyaka emithathu neCycling South Africa esisho ukuba imidlalo iyodlalelwa kulelidolobha kuze kushaye unyaka ka-2018.